I-Alumina ceramic tube / ipayipi / induku / rollerabakhiqizi nabahlinzeki | XTL
Impahla ye-alumina ceramic tube ihlukaniswe nge-95% al2One+, 99% al2One+, 99.7al2One+ ngokuya ngamazinga okushisa okusetshenziswa. Kunamashubhu wokuvikela kanye namashubhu wokufakwa kwe-thermocoumpules. Amashubhu wokufakelwa angashadile, aphindwe kabili, amane, futhi anomuso. Ukwakheka kweshubhu le-ceramic kuyindilinga, isikwele, unxantathu nezinye izimo ezidingekayo yikhasimende.
Ama-alumina amashubhu nezinduku atholakala kuyo yonke imboni yabasebenzisi abaningi njengekhambi elisebenzayo nokwenziwa okuphezulu. Inhlanganisela yezakhiwo ezibalulekile ibenze zibe ngumkhiqizo wokuya ezimweni eziningi: